Xog: Dhaawacyada ka dhasha bikra jebinta- iyo sida looga Fogaado, | JAALENEWS
Xog: Dhaawacyada ka dhasha bikra jebinta- iyo sida looga Fogaado,
Published on March 15, 2019 by Ashuraym · No Comments
Galmadu waa shay kamid ah nolasha dabiiciga ah waana wax aadanaha iyo Bahaahinkaba ay si dabiici ah ugu baahan yihiin, wax walbana waxa ay leeyihiin Advantage iyo DisAdvantage. marka ay imaato gabdha ha aan jirkoodoa u carbisneyn inay qataan galmo aad u baddan waxa ay kala kulmaan caqabado badanbalse mud uun kadib waxa ay noqdaan kuwa ay la qabsadaan ,
dhaawacyo kala duwan aya so kala gadhi kara lamaanaha hawsha u gaarka ah ku guda jira. Hadba arintan ayaa waxaa Gorofeeyay qolo reer Britan Ah oo la yiraahdo Phonepiggybank.com si loo ogaado dhaawaca soo gaadha lamaanaha marka ay raaxaysanayaan oo xaraaradoodu meel sare marayso iyo sida ay u dhacaan.
Baadhitaan ka dhacay wadanka England oo waraysi laga qaaday 1000 qof ayaa waxa la waydiiyay noocyada galmada iyo dhaawacyada ka soo gaadha marka ay raaxaysanayaan. Baadhitaanka ayaa waxa lagu ogaaday in sanad walba boqolaal kun dhaawac ka soo gaadho xiliga ay raaxaysanayaan. iyado lo saba beeyo dadka qaar oo qof uu xaraaradu qaado , halka uusan ba dareei karin in uu dhibaateynayo kan kale.
1\_3 Hal kamid ah seddexdii qofba mid ayaa waxa ka soo gaadho dhaawac marka uu weerar yahay ama lagu yahay ayada, laakiin waxa ay ogaadaan ama dareemaan dhaawaca maalinta dambe ee xaaladu degan tahay. Waliba dhaawaca ayaa qaar waxa uu gaarsiiyaa in ay maalinta dambe aadin shaqada oo ay guriga joogaan. qofka uwax garay dadka sida somalida okale wa dad aad u ad adag inkasto ay san u hitin dhawacyada yar ee ka dhasha qanjirada balse dadka kale waa ay la nastaan,
2. Dhabar xanuun keena enfection ,
3. Diirka oo ku xoqma ka dibna noqda sidii mid gubta. sabab to ah waxa ku yaraata dufanka ama lagaba yaabe inuusan lamaanuhu isticmaalin Kareemada fudud sida Fasiliinka,
4. Qoor xanuun .ka dhasha jiid jiidka ama rafashada qaar keed,
Gobaha ugu qatarsan ee la iska ilaaliyo ubaahan in lagu ciyaaaro
1 Kuraasta Fadhga
kuraasta kale ee gaagaaban